Global Voices teny Malagasy · 24 Mey 2017
24 Mey 2017
Tantara tamin'ny 24 Mey 2017
Kôlômbia: Ny Famindràna Toerana Ny Mponin'i Ituango
Amerika Latina 24 Mey 2017
Tery eo anelanelan'ireo mpiady anaty akata sy ireo vodrrona mitampidiana ivelan'ny tafika, voatery nandao ny taniny ary nikaroka fialofna atany an-tanàndehibe ireo olona miaina any amin'ny manodidina ilay tanàna kôlômbiana, ao Ituango. Ireo bilaogera no manoritsoritra ny toedraharaha.
Nampanantsoina ny Meksikàna iray mpampiasa Twitter amin'ny solonanarana @mareoflores mba hanazava bitsika iray nalefany talohan'ny loza nanjo ny angidimby nitondra ny Sekreteran'ny Atitany tao Meksika, bitsika toy ny efa 'naminany' ny fahafatesany. Mitatitra ireo fanehoankevitra voalohany tao amin'ny Twitter i Miguel Angel Guevara.
Libanona, Araka Ny Fomba Fijerin'ny Bilaogeran-tsary Iraniana Iray
Mpaka sary matihanina Iraniana sady bilaogeran-tsary nipetraka sy niasa tao Libanona nanomboka tamin'ny taona 2009 i Mohmmad Reza Hassani . Lasa loharanom-baovao nahitana raharaha mifandray amin'i Iran ao Libanona ny bilaogin-tsariny taorian'ny fitsidihan'ny Filoha Mahmoud Ahmadinejad ny fampirantiana sy ny fampisehoana mozika Iraniana
Azia Afovoany sy Kaokazy 24 Mey 2017
Mahita Fitoviana Mampiahiahy Amin'i Maduro ao Venezoelà sy ilay Maniry ho Filoha ny ao Meksika
"Tsy mahagaga raha mbola mino an'i AMLO ny olona, raha misy ireo mbola matoky an'i Nicolás Maduro ao Venezoelà, feno olona mora ambakaina eny rehetra eny."
Eoropa Afovoany & Atsinanana 24 Mey 2017
Rehefa avy nitatitra lohahevitra momba ireo hira amin'ny dokam-barotra mahatsikaiky ao Makedonia ny GVO, nipoitra tao amin'ny habaka Masedoniana ireo ohatra vitsivitsy maromaro. Ny tena voaresaka dia ny hira fanevan'ny Tanora Sosialista [MKD], sampan'ny tanora ao amin'ny Antoko Sosialista Makedonia.